प्रहरी निरिक्षक चाैलागाईं यसरी भए “पुलिस अफ द मन्थ” ? | mulkhabar.com
October 29, 2018 | 7:03 pm 124 Hits
सुनसरी, १२ कात्तिक –
तपाईंको सफलतामा सबैभन्दा खुशी काे हुन्छ ? सायद तपाईं नै हाेला त्यस्तै भएकाे छ प्रहरी निरीक्षक बुद्धिराम चौलागाईलाई । चाैलागाईं ‘पुलिस अफ द मन्थ’ घोषित भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरीमा कार्यरत चौलागाई ०७५ असोज महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित भएका हुन् ।
इटहरीमा चौलागाईले चोरी, लागुऔषध, फरार प्रतिवादी पक्राउ एवम अपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरि कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएको भन्दै घोषित एवम सम्मान गरिएको हो ।
उनले इटहरीको शान्ति सुरक्षामा सर्वसाधरणलाई सुरक्षाको अनुभुति हुने गरी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह निर्वाह गरेका थिए । उनलाई प्रहरी संगठनको छवि उच्च बनाइएको भन्दै सम्मान गरिएको सम्मान पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
चौलागाई तिन महिना अघिमात्र इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट इटहरी आएका हुन् । प्रहरीको काम कारबाहीलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले प्रत्येक महिनाको उत्कृष्ट एक जना प्रहरीलाई ‘उत्कृष्ट प्रहरी’ घोषित गदै आएको छ ।
प्रहरीले हिजाे मात्रै समुदाय – प्रहरी साझेदारी अभियान सुरूवात गरेकोे थियाे ।